Toyota HiAce 2002 (#671775) ကို Mingalartaungnyunt မြို့န... | CarsDB
Lot Number: #671775
TOYOTA HIACE WAGON KZH110 -G. 1-KZN Diesel Turbo
လူစီး YGN -license) 7i ——
Diesel Turbo good condition car, premium Diesel
Japan school Bus ,Any ferry——
‌ORGINAL ROUND AIRCON/ TV / BACK--CAMERA -
2 -power window key remove (Diesel turbo Auto .)----- (12 seat ) Good Co nation
‌လိုင်စင် 7i. YGN -License လူစိး ----
(210)ညိုနိုင်းသိန်း,Good Condition,Price is negotiable. ***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) RV Aung မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota HiAce 2002 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။